I-china ibhegi yebhanti yoshicilelo ebiyelweyo ibhegi yomxhesho mveliso kunye nabenzi | USunnan
Ukuprintwa kweBack Bag yaseKhaya eyenzelwe wena
Iibhegi zokutsala zivumela ukufikelela ngokulula kwizinto zakho ngokutsala ngokukhawuleza nangokulula komzobo.
Inombolo yomzekelo: I-SN-B1104
Umbala: Orenji okanye ngentando yakho
Igama lemveliso Ukuprintwa kweBack Bag yaseKhaya eyenzelwe wena
Inombolo yomzekelo I-SN-B1104
Oku kumibalabala ibhegi yomtyaunemizobo emibini enamandla yokuthuthuzela nokuphatheka. Ukuvalwa okuvulekileyo, okuvulekileyo kunye nokuvalwa okukuvumela ukuba ufake ngokulula kwaye ugcine izihlangu, iimpahla, iincwadi, izinto zombane ezincinci kunye nezinye izinto. Ilungele amadoda nabasetyhini kuyo nayiphi na imisebenzi yangaphakathi / yangaphandle.
Umqolo wobhaka: Ukuvalwa komtya phezulu koku ibhegi yesinch ibonelela ngokukhawuleza, ngokulula ukufikelela ngaphakathi ukugcina izixhobo zakho.
Efanelekileyo Size: Ubukhulu be-45 * 34cm, inkulu ngokwaneleyo ukuba inokuthwala izinto ezahlukeneyo ezinje ngempahla yokuzivocavoca kunye nezihlangu, izixhobo zokudada, itawuli yezemidlalo, iincwadi, izinto zemihla ngemihla.
Ukuzinza kunye nokuthuthuzela：Yenziwe ngamalaphu e-polyester angama-210D angenawo amanzi ahlala ixesha elide kwaye amelana nokuwohloka kwemihla ngemihla kunye nemisonto.
OOMATSHINI BAYAHLAMBEKA: Ukuhlambeka yinto eyimfuneko kuwo nawuphi na umtya wokubopha umtya. Eyethuibhegi yomtyaIzinto ezinokuhlanjwa ngomatshini, cebisa isepha esicocekileyo kwaye uxhome ukoma!
IZIPHUMO EZININZI: Fumana ukusetyenziswa okuphezulu kwiipakethi zethu zeDrawstring. Ukugqibelela ukuba iqela lithande iibhegi ezilungileyo, iingxowa zeGym, izibonelelo zokwazisa, imicimbi yequmrhu, nokunye okuninzi!
Yamkela i-OEM kunye ne-ODM: Iingxowa zethu ze-cinch zi-100% i-210d ipholiyesta kwaye zilungele nayiphi na into yokuprinta kwesikrini, ukuhombisa okanye ukuhombisa ubugcisa. Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ulwenziwo loyilo lwakho.
* Kuya kubakho ivumba xa ulifumana, kodwa liyakuhamba emva kwethutyana.
* Nceda nceda uvumele umahluko omncinci wombala ukusuka kumfanekiso obonisiweyo ngenxa yokukhanyisa xa umfanekiso wawudutyulwa.
* Nceda nceda uvumele impazamo yokulinganisa eyi-1-2cm ngenxa yobungakanani obulinganiswe ngesandla.
Egqithileyo Ihowuliseyili Quality Camo Luhlala Hunting Sport yangaphandle Drawstring ubhaka
Okulandelayo: I-OEM Anti-Slip Grip Yoga Trampoline Socks Ihowuliseyili